musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » French Mapurisa Vaccine Pass Anopamba Asina chinhu Paris Cafés
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • France Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mazhinji maresitorendi emumugwagwa aive akagara asina chinhu sezvo vatengi vavo venguva dzose vakasarudza panzvimbo pekugara pamabhenji eruzhinji kunze.
Macron inowedzera kupfuudza kwekudzivirira kumaresitorendi.
Ivo vasina pasipoti vanotarisana nefaindi ye135.
Iyo yakanaka inowedzera kusvika ku € 9,000 yekudzokorora kukanganisa.
Nhasi, hurumende yemutungamiri weFrance, Emmanuel Macron yakawedzera iro gakava rekuti 'pass sanitaire' kunzvimbo dzekudyira, kusanganisira dzekunze, vachiramba vhiki yekuratidzira kwakawanda muFrance.
Mapurisa eFrance atanga kupinda mumaresitorendi nemaresitorendi nekusimbisa chinodiwa chekudzivirira, zvoita kuti matafura avo ave asina chinhu panguva yekudya kwemasikati, sezvo veruzhinji veFrance vachidya mabhenji eruzhinji panzvimbo.
Maresitorendi nevateereri vanodyiwa vasina pasipoti vanotarisana nemuripo we € 135 ($ 158), izvo zvinowedzera kusvika ku € 9,000 ($ 10,560) yekudzokorora kukanganisa.
Pakazosvika nguva yekudya kwemasikati, maresitorendi mazhinji emumigwagwa vanga vakagara vasina chinhu sezvo vatengi vavo venguva dzose vakasarudza kugara pamabhenji eruzhinji kunze - zvinoenderana nehuwandu hwemifananidzo uye zvirevo zvakatumirwa pasocial media, zvakadaro.
Zvemagariro enhau mavhidhiyo nemifananidzo zvakaratidza nzvimbo dzekunze dzine vashoma vekudyira paChamps Élysées, Paris'main nzira.
Paive nemifananidzo yematafura asina chinhu mhiri kweguta pane dzimwe nguva apo nzvimbo dzakadai dzaiwanzo kunge dzakazara.
Iyo inozivikanwa Grande Brasserie, padyo neBastille mraba, yaive nevatengi vashoma mukati, asi hapana akabuda papatio yayo.
Iko kupasiswa, kwakaunzwa naMacron kumanikidza majekiseni ekurwisa Covid-19, kwave kusungirwa kuti upinde mumamuseum, dzimba dzemamuvhi, madziva ekushambira, uye dzimwe nzvimbo kubva muna Chikunguru 21. Matare akatonga zvakare kuti zvaive bumbiro remitemo kurayira majekiseni evashandi vehutano. , vamwe vacho varamwa mabasa vachiratidzira.
Takatarisana nenhamba inokwira yezviitiko zveCOVID-19 zvinonzi zvakasiyana nedelta zvehutachiona, zviremera zveFrance zvakamanikidza zvakanyanya kubaya munhu wese. Zvichakadaro, vanogadzira vaccine Pfizer uye Dzazvino vakawedzera zvakanyanya mutengo wemishonga yavo muEuropean Union.